Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Mkpa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher - NAB Gosi News site na Mgbasa ozi. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » News » Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Chelmsford, Mass - Nov. 8, 2018 - Mgbe Calvary Chapel Modesto weghachite ụlọ ya na September, ọ naara ohere iji wụnye switcher Broadcast Pix ™ BPswitch ™ MX. Chọọchị ahụ na-arụpụta otu oge m MAG (mbido oyiyi) mkpuchi ọrụ ya maka ọgbakọ yana igwefoto igwefoto maka ịnweta ndụ.
Dabere na Modesto, Calif., Calvary Chapel bụ ụka na-abụghị ndị ụka karịa ndị òtù 3,500. Dabere na ogige 17-acre na ụlọ 50,000, ụlọ ụka ahụ na-enye ọrụ ehihie ise kwa izu. Ọrụ Sunday na Wednesday na-ebi ndụ, ọrụ Sunday ya na-adọta ndị na-ekiri 1,800 na gburugburu ụwa.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị ọrụ afọ ofufo na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ elu na ụlọ ụka dị iche iche nke nwere windo dị n'otu ụzọ nke nyere echiche nke ebe nsọ ahụ. Dave Abbey, onye nduzi mgbasa ozi, kwuru na ntọala ahụ rụrụ ọrụ ruo oge ụfọdụ, ma n'ikpeazụ, ndị na-ese ihe na ndị na-ege ntị na-aga ebe dị ala. Mgbe ụka ahụ kpaliri ìgwè ndị ọrụ ahụ dum n'elu ụlọ tupu afọ a, o kpebiri ịkwalite Granite ™ mmepụta ngwa ngwa na mmepụta ngwá ọrụ ndị ọzọ. Ụlọ Akwụkwọ Calvary na Brad C. Shields na Associates na Modesto maka njikọta niile.
Dị ka Granite, onye ọhụụ ọhụrụ ahụ kwesịrị inwe ike ịchịkwa atọ ahụ Sony Igwe PTZ arụnyere na mgbidi nke ebe nsọ ahụ, yana ịmepụta ihe omume abụọ n'otu oge. Ọ bụ ezie na m na-emepụta MAG bụ ntakịrị ihe igwefoto na-ejikọta na lyrics site na ProPresenter, mmepụta ihe na-emepụta ihe na-eji foto atọ dị iche iche na nkwonkwo CG na ọdịnaya ndị ọzọ.
Ọrụ BPswitch's PowerAux nyere ọrụ dị mkpa Abbey dị mkpa, chọọchị ahụ wee nwee ike ịchekwa ego site na iji mpaghara nchịkwa Granite. "Ọ dị m mkpa nke ukwuu na anyị nwere ahụmahụ 2 M / E na-enweghị ihe efu nke 2 M / E switcher," ka o kwukwara. "Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu, anyị hụrụ ya n'anya nke ukwuu."
Ụlọ nchịkwa ọhụrụ ahụ dị ka ụlọ ntu nke ogige dị mkpirikpi gbara gburugburu. "Na mmepụta ndụ, ị na-achọkarị iche, mana maka anyị nke ahụ adịghị mkpa," ka Abbey kọwara. "Ugbu a, anyị nwere techs atọ niile n'ime ụlọ ahụ, ya mere nkwurịta okwu ka mma. Ọ bụ ihe dị iche iche abalị na ụbọchị. "
E wezụga ọrụ niile, BPswitch emeela ka ọrụ ncheta dịwanye mma, nke bụ isi iyi maka nkụda mmụọ maka ìgwè mmepụta vidiyo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ncheta ọ bụla gụnyere vidio, Abbey na-enwetakwa ọdịnaya n'ime ụdị faịlụ dị iche iche. Site na BPswitch ọhụrụ ahụ, Chapel Calvary jiri usoro nhazi mgbasa ozi igwe ojii nke BPNet ™ wuru. Abbey na-eziga njikọ ebe ndị nhazi nwere ike bulite vidiyo ha. Mgbe ahụ, a na-agbanwe vidiyo ahụ n'ụzọ na-akpaghị aka ma dị maka playback na BPswitch.
Ndị ọzọ nchịkwa ime ụlọ na-agụnye elele 27-anụ ọhịa abụọ kwalite, nakwa dịka onye na-egwu egwu egwu di egwu na Dante di ohuru. audio netwọk. Calvary Chapel gbakwụnyekwara ihe nlekota anya na ụlọ nchịkwa, ma jiri ntụgharị mgbasa ozi Broadcast Pix Commander ™ gbanwee m MAG ngosi maka ebe nsọ.
Site na ngwa ngwa na switcher na 3D na-emegharị ngosi CG, Broadcast Pix na-enye usoro ihe nkiri vidio nke zuru oke n'ụzọ zuru ezu na njikwa teknụzụ na njikwa ngwa ngwa. Site na nkeji dị iche iche na ngwọta ọtụtụ, usoro mgbasa ozi ọ bụla na-egosipụta ngwa ngwa dị ukwuu nke na-eme ka ọ dị mfe ebuli ma hazie ọrụ gị na mpaghara na n'elu IP. Ọzọ, njirimara nke BPNet na-enye ọrụ igwe ojii nchedo na njikwa ihe onwunwe. Ntọala na 2002, Broadcast Pix nwere ndị ahịa karịa mba 100 na ọ bụ onye ndú na-emepụta ndị na-emepụta ihe maka gọọmenti, mgbasa ozi, ntaneti, ihe omume ndụ, na ngwa redio anya. Mụtakwuo na www.broadcastpix.com.
Pix Broadcast Pix, Onye na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi, BPNet, BPswitch, na Granite bụ ụghalaahia nke Broadcast Pix, Inc. Patented. A na-eme ndị na-eti mkpu na USA.
Ọhụrụ posts site Pipeline Communications (-ahụ ihe niile)
IHE ANYỊ KWUKWU NDỊ KWESỊRỊ N'ỤLỌ NCHEWU ACHỤKWU NDỊ DỊ N'IME WFX Expo - November 12, 2018
Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher - November 8, 2018
Mgbasa Ozi Mba nke Nepal Na-ahọrọ IHE-A maka Nweta Nkwalite Full HD - November 1, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcast Pix mwekota mmepụta switcher Ụgha & Akụrụ gụgharia video Engineer ofufe	2018-11-08
Previous: Technicolor PostWorks 'Ben Murray na-edu otu Panel na Nkesa na DOC NYC
Osote: Rising Sun Pictures Education: Joannah Anderson Interview
Archives Họrọ net November 2018 (213) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) Ka 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) Ka 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) Ka 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) Ka 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) Ka 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) Ka 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, Achọpụtara m ozi a maka gị: "Calvary Chapel Modesto Na-ebugharị Ụlọ Nchịkwa, Nwelite na Broadcast Pix BPswitch Integrated Production Switcher". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/calvary-chapel-modesto-moves-control-room-upgrades-to-broadcast-pix-bpswitch-integrated-production-switcher/. Daalụ.